ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်သင်သည်မေတ္တာတရားကိုဖြစ်ကြသည်ကိုဘယ်လိုသိထားပါပါနဲ့?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 16 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ငါ၏မေတ္တာ၌ကျသဖြင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အောက်မေ့သတိရ. ထိုနောက်မှငါသည်သမ္မာတရားကိုဖြစ်နိုင်ချက်ချင်းသင်၏နှလုံး၌သင်တို့ကိုသိသည်ထင်. သင်နဲ့လူများနှင့်သင်သည်ဤလူတဦးတယောက်နှင့် ပတ်သက်. ခံစားရလမ်းခရီးခဲ့သမျှသောသူတို့သည်ခြင်းကိုခံရနှင့်ခိုင်ခံ့သောစိတ်ခံစားချက်များအကြားခြားနားချက်ကိုသိ. ဟုခုနှစ်တွင်, သင်မည်သို့သိအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြီးသောအနည်းငယ်အကြောင်းပြချက်မှဆင်းအနာစိမ်း.
သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးချစ်မိတဲ့အခါသင်တို့၏အန္တရာယ်အရှိဆုံးမှာ. သင်သည်ထိုသူတို့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေလို, သူတို့ကိုအထင်ကြီး, သူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေ. သူတို့သည်သင့်အဘို့ရှာဖွေပထမဦးဆုံးတဦးတည်းဖြစ်၏ဥပမာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ဆုံးရှုံးဆိုရမည်. ထိုသို့ Oh '' သောလမ်း၌မဖြစ်, ထိုဆင်းရဲသားကိုလူတစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။’ ထိုသို့ထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းမယ့်. သင်သည်ထိုသူတို့မှဖြစ်ပျက်မဆိုမကောင်းတဲ့အရာကိုမခံနိုငျ. သူတို့ကမကောင်းတာဘာမှသူတို့ကိုဖြစ်သွားဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏လွန်းကောင်းပါတယ်. သူတို့ကဘာဖြစ်သွားဖို့မကောင်းတာဘာမှထိုက်ပါဘူး. သူတို့ကသင်မတည်ရှိခဲ့သည်ဟုထင်ခံစားချက်များအားတက်သင်ဖွင့်လှစ်ပြီသင်တို့သည်အစဉ်အဆက်တွေးမိနိုင်ထက် ပို. အံ့သြစရာင်. သင်သည်သူတို့ကြိုက်ဂီတသို့ရတဲ့စတင်. သင်သိဘယ်တော့မှမ, ဒါကြောင့်ကိုယ့်စကားရဲ့ start ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ထိုသို့ unrequited င်လျှင်, ဒါကြောင့်ဖြစ်. သင်ကသူတို့ကိုဘယ်လိုခံစားရလမ်းမှရဝမ်းမြောက်ခြင်းအကျိုးပျက်၏မည်သည့်ပြောင်းရန်အတွက်သုံးပါတယ် (သို့မဟုတ်စိတ္တဇအနီး!) သူတို့ကိုသင်စရာမယူနိုင်သောကြောင့်သာသင်တို့ခံစားနေရတယ်ဖြစ်ကြောင်း. ဒီတော့အခြေခံအားဖြင့်အန္တရာယ်ကျရောက်လွယ်ဖြစ်နဲ့သူတို့နှင့် ပတ်သက်. အရာရာတွင်ပျောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်သင်သိင့်ရဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းနှင့်သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူရှိလူအပေါင်းတို့သည်သင့်အိပ်မက်တွေကိုစွန့်လွှတ်မည်ဟုသင်တို့ သိ.. ငါအရမ်းရည်မှန်းချက်ကြီးမားရယ်နဲ့ကျွန်မလိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးအရာငယ်ရွယ်ဆင်းချည်ထားရကြမည်ဖြစ်သောကြောင့်ငါသိခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မယ့်ထင်ပေမယ့်သူငါ့ကိုပြန်ပို့ချင်ပါပြီင့်လျှင်ထိုသူသည်ငါကိုသူ့အဘို့ရှိသည်မည့်အချိန်တွင်ငါသိအခြေချချင်တယ် အရာကိုငါအသီးအသီးအဘို့ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းသိ.
သင်သည်လူမျိုးအကြောင်းဒီရှိသည်ကျင့်သောကြောင့်ဤအရာ၌သင်သည်လည်းပေါ်ခြင်းကိုခံရရှိသည်ခက်ခဲတဲ့တစ်ဦးဖြစ်သည်ဒါပေမယ့်လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ဖြစ်ထဲမှာအချက်ဖြစ်တယ်. ဒါဟာရူးနေပြီဖြစ်ဆန့်ကျင်သကဲ့သို့သင်တို့မေတ္တာကိုရောက်နေတဲ့အခါဒီ list အပေါ်အခြားအချက်များအပြင်င့်မယ့်. ငါနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကြီးကောင်လေးအကြောင်းငါ့နှမတစ်တွေအများကြီးပြောနေတာကိုသတိရ. သူ့ကိုငါမပြောခဲ့ပါဘူးဒါပေမယ့်သူမက သိ.. ငါသည်ထိုဘယ်လောက်အံ့သြလောက်-up ကိုပိတ်မလို့သူမကပြီးနောက်အသက်အရွယ် ပြု. ဝန်ခံခဲ့သည်, ဘယ်လောက်ရယ်စရာကောင်းသူဖြစ်လေ၏, သူဘယ်လိုကြင်နာခဲ့, သူဘယ်လိုအကြှနျုပျတို့ပါဝင်ချင်ပါတယ်, အရှက်တ, စကားပြောဆိုချက်တွေကိုအတွက်.
ဟုတ်ကဲ့, သင်အာရုံစိုက်မည်သည့်ပုံစံဖေါ်ပြခြင်းဖြင့် fancy သင်မူကား, တစ်စုံတစ်ဦးချစ်ကြသောအခါကထက်ပိုမိုင်တစ်စုံတစ်ယောက်အားဖြင့်အလွန်ပျော်ရွှင်ရနိုင်. ဒါဟာ bit နဲ့ connection တစ်ခုတူခံစားရ. သူတို့၏အသက်တာတွင်သူတို့သည်သင့်အားစကားပြော! သောကအနည်းငယ်ညှိုးငယ်အသံသင်မူကား, တစ်စုံတစ်ဦးချစ်ကြသောအခါသင်တို့ကိုစုံလင်ကဲ့သို့သူတို့ကိုမြင်သောကြောင့်သင်တို့ကိုစုံလင်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမြင်နိုင်ကြဘူးဘယ်မှာသဘာဝပင်ဖြစ်သည်. ထိုသူတို့ကသင့်ရဲ့အမည်ဖော်ပြထားခြင်းတဲ့အခါမှာတေးသွားကဲ့သို့မြည်. သင်သည်အစဉ်အဆက်ကြားဖူးတယ်ထူးခြားအကောင်းမွန်ဆုံးအရာနှင့်တူ. ငါသည်အ connection ကိုပြောသည့်အခါကဖြစ်နိုင်တဲ့ရင်ခုန်စရာ connection ကိုဖြစ်နိုင်ပေမယ်က unrequited င်လျှင်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီး connection ကိုဖြစ်နိုင်. သူတို့သည်သင့်ကိုပြန်မချစ်ပေမယ့်သင်နေဆဲအချို့စွမ်းရည်မြှင့်အတွက်သင့်အသက်တာမှာသူတို့ကိုချင်တယ်သူတို့ကိုမချစ်နဲ့ကကမ္ဘာပေါ်တွင်အ healthiest အခြေအနေဖြစ်ပါ့မလားဟုပြောဆိုငြင်းခုန်ဖို့ပွင့်လင်းပေမယ်ကကျိန်းသေကစားအလုပ်တွင်မည်သို့လူ့စိတ်ခံစားမှုင်လျှင်အရာဖြစ်၏.
သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့နက်ရ​​ှိုင်းသောတောင့်ရှိပါသည်သင်သူတို့ကိုတဖန်မမြင်ရစေခြင်းငှါ, စဉ်းစားသောအခါအတွင်းအပြင်ဒီအချည်းနှီးသောခံစားမှုလည်းမရှိ. တကယ့်ကိုဆိုးဝါးင်. ထိုအခါသင်သည်အနည်းငယ်အချိုရည်ရှိပါက, ကပိုဆိုးရရှိသွားတဲ့. သင်သည်ဟစ်ကြော်လျက်စတင်. တဖန်သင်တို့ဖြစ်နိုင်တစ်ဦးအချစ်နဲ့ကျော်ကဲ့သို့ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး. ဒါဟာသင့်အသက်တာမှာသူတို့ကိုရှိခြင်းနှင့်သင့်ဘဝတူခံစားမတစ်ဦးအချည်းနှီးသောခံစားချက်သူတို့မရှိဘဲပြီးပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်. ဒါကြောင့်တစ်နှစ်ခွဲဘဝင့်လိုပဲ. သင်အောင်မြင်အရာအားလုံးအရေးမကြီးပါဘူးမည်မဟုတ်. သို့သော်သင်သည်မှတဆင့်ရ. ဒါဟာတာရှည်လမ်းဖွင်သင်မူကား, အခြားဘက်ခြမ်းကိုထုတ်လာကြဘူး.